Public Health in Myanmar: January 2009
Posted by Ye-Mon 14 comments
ရီဘတ်ပလင်ကင် သမ္မတ တက်လာရင် ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတ ချခဲ့တဲ့ ပေါ်လစီတွေကိုပြောင်း၊ ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတ တက်လာရင် ရီဘတ်ပလင်ကင် သမ္မတ ချခဲ့တဲ့ ပေါ်လစီတွေကိုပြောင်း စသဖြင့် ဖြစ်နေကျ အမေရိကန် နိုင်ငံရေး လောကထဲမှာ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စလေးတစ်ခုမို့ မီးမောင်းထိုးပြချင်ပါတယ်။ မက္ကဆီကိုစီးတီး ပေါ်လစီ (သို့) Global Gag Rule လို့ လူသိများတဲ့ ပေါ်လစီတစ်ခုပါ။ ဒီအကြောင်း မပြောမီ နောက်ခံသမိုင်းကို ပြောမှ ဇာတ်ရည်လည်မယ် ထင်ပါတယ်။
၁၉၇၀ ခုလွန် နှစ်များတုန်းက ကမ္ဘာ့ လူဦးရေတိုးနှုန်း မြန်နေမှုဟာ စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ ကိစ္စတစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ လူဦးရေတိုးနှုန်း မြန်သလောက် အစားအစာထုတ်လုပ်နိုင်မှု (အဓိကအားဖြင့် စိုက်ပျိုး၊ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများ တိုးချဲ့နိုင်မှု) နှုန်းက အလျင်မီအောင် မလိုက်နိုင်ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီလိုသာ ရှေ့ဆက်သွားရင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ အငတ်ဘေး ဆိုက်ရချေရဲ့လို့ ပညာရှင်တွေက တွေးကြပါတယ်။
အမေရိကန် အစိုးရရဲ့ နိုင်ငံတကာ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ အကူအညီပေးရေး ဌာန (USAID - the US Agency for International Development) ကလည်း ကမ္ဘာ့လူဦးရေတိုးနှုန်း လျော့ချရေးကို အဓိကရည်ရွယ်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံတွေက သားဆက်ခြား စီမံကိန်းတွေကို ပံ့ပိုးလာပါတယ်။ အဲဒီ အချိန်တုန်းက ခေတ်ပေါ် သားဆက်ခြားနည်းတွေကလည်း တီထွင်ပြီးခါစဖြစ်ပြီး USAID ရဲ့ အထောက်အပံ့ဟာ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံတွေအတွက် စီမံကိန်းအသစ်တွေစဖို့ တကယ့်ကို လောက်လောက်လားလား အထောက်အကူ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
အစပိုင်းမှာတော့ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံတွေက အမေရိကန် ပြောတာကို မယုံမရဲနဲ့ စမ်းသပ် ကြည့်ရုံ အဆင့်လောက်သာ ရှိပြီး နောက်ပိုင်း တကယ် အကျိုးရှိမှန်း သိလာတဲ့အခါ (ဥပမာ - အိန္ဒိယ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံများမှာ) သားဆက်ခြား စီမံကိန်းတွေကို အစိုးရတွေက အတော်အားပေးလာပါတယ်။ ဒီလို အရှိန်ရလာပြီးမှ သိပ်မကြာသေးဘူး ၁၉၈၄ မှာ သမ္မတာ ရော်နယ်ရေဂင်က မက္ကဆီကိုမြို့ ပေါ်လစီကို ပြဋ္ဌာန်းပါတယ်။ ပေါ်လစီ အနှစ်ချုပ်ကတော့
အမေရိကန် နိုင်ငံက ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံများရဲ့ သားဆက်ခြား စီမံကိန်းများကို ထောက်ပံ့ကူညီခဲ့ခြင်းသည် အောက်ပါအချက် ၃ချက်ပေါ်တွင် အခြေခံပါသည်။
လူ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့အညီ ရှင်သန်ကြစေဖို့လိုလားခြင်း နှင့်
မိသားစုဝင်များ အချင်းချင်း စည်းစည်းလုံးလုံး နေထိုင်နိုင်ကြစေခြင်း
သို့ရာတွင် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ခြင်းကို သားဆက်ခြားနည်း တစ်ရပ်အနေဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အတင်းအဓမ္မ သားဆက်ခြားစေခြင်းတို့သည် မလုပ်သင့် မလုပ်အပ်တဲ့ကိစ္စများ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမေရိကန် အစိုးရ၏ သားဆက်ခြား စီမံကိန်း အထောက်အပံ့ကို ရယူတဲ့ အစိုးရများဟာ ထိုထောက်ပံ့ငွေနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချပေးခြင်း ကိစ္စများ မဆောင်ရွက်ရပါ။ နိုင်ငံတကာ အန်ဂျီအို (အမေရိကန် နိုင်ငံ၏ အန်ဂျီအိုများ အကျုံးမ၀င်ပါ။) များအနေဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်း အကြောင်းကို အသိပညာပေးခြင်း၊ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း ပြုလုပ်ပါက အမေရိကန်အစိုးရ၏ သားဆက်ခြား စီမံကိန်း ထောက်ပံ့ငွေကို လုံးဝ ရယူခွင့်မရှိပါ။
ဤနေရာတွင် သားဆက်ခြားနည်းများ အကြောင်းကို အနည်းငယ် ရှင်းလင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။ တားဆေး၊ ထိုးဆေး၊ ကွန်ဒုံး၊ သားအိမ်တွင်းထည့်ပစ္စည်း၊ သားကြောဖြတ်ခြင်း စသည့် လူသုံးများသော သားဆက်ခြားနည်းများသည် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်း မဟုတ်ပါ။ သို့ရာတွင် အချို့သော နိုင်ငံများတွင် ဖော်ပြပါ သားဆက်ခြားနည်းများကို လွယ်လင့်တကူ ရရှိနိုင်ပါလျက် အသုံးမပြုပဲ ကိုယ်ဝန်ရရှိလာမှသာ ဖျက်ချခြင်းပြုလုပ်တတ်ကြပါသည်။
ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းကို မကျွမ်းကျင်သူများက ဆောင်ရွက်သောကြောင့် ရောဂါပိုးဝင်ပြီး အသက်အန္တရာယ် ထိခိုက်သည့် ဖြစ်ရပ်များမှာ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံများတွင် အဖြစ်များပါသည်။
အန်ဂျီအိုများတွင် ရန်ပုံငွေ ရရှိပုံ နည်းလမ်း တစ်ခု မကရှိတတ်ကြသည်။ အမေရိကန် အစိုးရပေးသည့် ရန်ပုံငွေဖြင့် မဟုတ်ပဲ အခြားရန်ပုံငွေဖြင့် တရားဝင် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချပေးခြင်း ကိစ္စရပ်ကို ဆောင်ရွက်ပင် ဆောင်ရွက်ငြားဖြစ်သော်လည်း၊ အမေရိကန် အစိုးရ၏ ရန်ပုံငွေကို မရရှိနိုင်ပါ။
ဒီပေါ်လစီကို ရော်နယ်ရေဂင့် ကိုယ်စားလှယ်က ၁၉၈၄ ခုနှစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူဦးရေညီလာခံ ကျင်းပရာ မက္ကဆီကိုမြို့မှာ တရားဝင် ကြေညာလိုက်တာကို အစွဲပြုပြီး မက္ကဆီကိုစီးတီး ပေါ်လစီ လို့ နာမည်ပေးခံရပါတယ်။
ရော်နယ်ရေဂင် အစိုးရကို ဆက်ခံတဲ့ ဂျော့အိပ်ခ်ျဒပ်ဗလျူဘွတ်ရှ် အစိုးရ သက်တန်းကုန်လို့ ဘီလ်ကလင်တန် အစိုးရ ဖြစ်လာချိန် ၁၉၉၃ ဇန္န၀ါရီလ မှာ ပထမဦးဆုံး ပယ်ဖျက်ပေးလိုက်တဲ့ ပေါ်လစီကတော့ မက္ကဆီကိုစီတီး ပေါ်လစီ ပါ။
ကြမ္မာရဟတ် တစ်ပတ်လည်ပြီး ရီဘတ်ပလင်ကင် သမ္မတ ဂျော့ခ်ျဒပ်ဗလျူဘွတ်ရှ် အလုပ်စ၀င်တဲ့နေ့ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၊ ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှာ ပထမဆုံး ပြန်လည် အသက်သွင်းတဲ့ ပေါ်လစီကလည်း ဒီ မက္ကဆီကိုစီးတီး ပေါ်လစီ ပါပဲ။
အခု နောက်ဆုံး ဒီမိုကရက် ဘရက်ခ်အိုဘားမား သမ္မတ ဖြစ်လာတဲ့ ပထမ ရက်သတ္တပတ် အတွင်းမှာပဲ မက္ကဆီကိုစီးတီး ပေါ်လစီကို ပယ်ဖျက်လိုက်ပြန်ပါတယ်။ အနည်းဆုံး နောက်ထပ် ၄ နှစ်လောက်တော့ ဒီပေါ်လစီ အသက်မ၀င်ပဲ ရှိနေဦးမှာ သေချာပါတယ်။
The White House Office of Policy Development. Population and Development Review, Vol. 10, No.3(Sep., 1984), pp. 574-579. US Policy Statement for the International Conference on Population.
Posted by Ye-Mon3comments
Labels: Family Planning, Health policy, Reproductive Health, USA
လူထု ကျန်းမာရေး နဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စရပ်များ
(တွေးမိတဲ့ အတွေးလေးတစ်စကို သူငယ်ချင်းတွေ ဖတ်ဖို့ ရေးပေးခဲ့တာကို ပြန်တင်ပေးလိုက်တာပါ။)
ကျန်းမာတယ်ဆိုတာ ရောဂါ မရှိရုံ တင်မကဘဲ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ လူမှုရေး ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ ပြည့်ဝ ကောင်းမွန်နေမှ ခေါ်တယ်ဆိုတာကို ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့ ကျန်းမာခြင်းဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုချက်ကို ကြားဖူးသူတိုင်း သိပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။ ဒီတော့ ကျန်းမာဖို့ အတွက် လိုအပ်ချက်တွေ ဘယ်လောက် များမယ်ဆိုတာ ထင်ရှားပါတယ်။
လူထုတစ်ရပ်လုံး ကျန်းမာရေးနဲ့ ပြည့်စုံဖို့အတွက်ဆိုရင် ဘာတွေ လိုအပ်မယ်လို့ ထင်ပါသလဲ။
အဲဒီလိုအပ်ချက်တွေကြောင့် ရှိသမျှ နည်းပညာတွေ၊ အလုပ်တွေထဲမှာ လူထုကျန်းမာရေးနဲ့ လုံးဝ မသက်ဆိုင်ဘူးလို့ ပြောလို့ရမယ့် အလုပ်မျိုး ရှိဖို့ ခဲယဉ်းလှပါတယ်။
ဥပဒေရေးရာ၊ လူမှုရေး ဘာသာဗေဒ၊ စီးပွားရေးပညာ၊ ပထ၀ီ၊ အကြမ်းဖက်မှုတွေကို လေ့လာတဲ့ နည်းပညာ၊ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်မှု နည်းပညာ၊ စိတ်ပညာ၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ စပ်ဆိုင်တဲ့ ပတ်ဝန်း ကျင် ထိန်းသိမ်းမှု ဆိုင်ရာ နည်းပညာနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ ဥပဒေပညာရပ်၊ အာဟာရပညာ၊ ကိုယ်လက် လှုပ်ရှားမှု ဆိုင်ရာ နည်းပညာ စတာတွေက ယနေ့ခေတ်မှာ လူထု ကျန်းမာရေးရဲ့ လှုမှုရေးနဲ့ အပြုအမူပိုင်းဆိုင်ရာ ရှုထောင့် (social and behavioral aspects of public health) နဲ့ဆက်နွယ်ပတ်သက်နေတဲ့ နည်းပညာရပ် တွေလို့ လက်ခံလာကြပါပြီ။
အဲဒီထဲမှာ မပါတဲ့ တခြားကိစ္စရပ်တွေကို တွေးကြည့်ရအောင်။
ဆောက်လုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာ အင်ဂျင်နီယာ နည်းပညာဆိုပါတော့။ လူထုကျန်းမာရေးနဲ့ သက်ဆိုင်ပါသလား။
လမ်းတွေ၊ တံတားတွေ ပြိုကျတာ၊ လမ်း တည်ဆောက်ပုံ မကောင်းလို့ ယာဉ်တိုက်မှု ခဏခဏ ဖြစ်တာတွေက လူထုကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်သလား၊ မထိခိုက်ဘူးလားဆိုတာ တွေးကြည့်လိုက်ရင် အဖြေပေါ်ပါတယ်။
သဘောင်္နစ်လို့ လူတွေ သေဆုံးပျက်စီးတာ၊ ထိခိုက်တာမျိုးတွေက လူထု ကျန်းမာရေးနဲ့ ဆိုင်၊ မဆိုင် တွေးကြည့်ပါ။
မြောင်းရှင်းတဲ့ သန့်ရှင်းရေး အလုပ်သမားကရော။
မြောင်းကို သူရှင်းပေးလို့၊ သန့်ရှင်းသွားတာ၊ ခြင်တွေ မခိုတော့တာက လူထု ကျန်းမာရေးနဲ့ ဆက်စပ် ပါသလား။
သူ အမှိုက်ကို မှန်မှန် လာသိမ်းပေးတဲ့အတွက် လူတွေ အမှိုက်ကို စနစ်တကျ စွန့်ပစ်ကြမယ်ဆိုရင် ယင်တလောင်းလောင်းနဲ့ လမ်းဘေးက အမှိုက်ပုံတွေ မရှိတော့တာမျိုးက လူထု ကျန်းမာရေးနဲ့ သက်ဆိုင်မယ် ထင်ပါသလား။
သူ တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းမှု မရှိရင် စားတဲ့သူတွေ ဘာဖြစ်သွားနိုင်ပါသလဲ။
စာရေးဆရာ၊ သတင်းသမားတွေကရော လူထု ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက် နေပါသလား။
ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သတင်းအမှားတွေ၊ ယုံကြည်မှု အမှားတွေကို ရေးသားခဲ့ရင် လူတွေ ဘယ်လို ထိခိုက်မယ် ဆိုတာ မြင်သာပါတယ်။
တကယ်တော့ ကိုယ် ဘာအလုပ်ကိုပဲ လုပ်လုပ်၊ စေတနာမှန်မှန်နဲ့ လူတွေကို မထိခိုက်အောင်၊ မနစ်နာအောင်၊ မျှတမှု ရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေ အားလုံးဟာ လူထုကျန်းမာရေးအတွက် ပါဝင် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ပေးနေသူချည်းပဲလို့ ပြောရင် မှားမယ်လို့ မထင်ပါဘူး။
Posted by zinthu4comments
Posted by zinthu3comments
ငှက်ဖျားရောဂါ ကာကွယ်ဆေး အလားအလာ
ငှက်ဖျားရောဂါ ဆိုတာ မြန်မာ စာဖတ်ပရိတ်သတ်တွေနဲ့ ရင်းနှီးပြီးသားပါ။ ခြင်ကြောင့် ကူးစက်တတ်တဲ့ ဒီရောဂါကြောင့် တစ်နှစ်ကို လူတစ်သန်းခန့် အသက်ဆုံးရှုံး နေရပါတယ်။ မြန်မာ အပါအ၀င် အာရှနိုင်ငံ တစ်ချို့နဲ့ အာဖရိက နိုင်ငံတွေဟာ ငှက်ဖျားရောဂါ ဒဏ်ကို အများဆုံး ခံစားနေရပါတယ်။
ငှက်ဖျားရောဂါ ကာကွယ်ရေး အတွက် ကျန်းမာရေး ၀န်ထမ်းတွေက ကျေးလက်ဒေသတွေမှာ အသိပညာပေး ဟောပြောပွဲတွေ၊ ကာကွယ်ဆေးတိုက်ကျွေးခြင်းတွေ ကို အားကြိုးမာန်တက် လုပ်ဆောင်ပေးနေပါတယ်။ Rural health centre လို့ ခေါ်တဲ့ ကျေးလက်ကျန်းမာရေး ဌာနတွေဟာ ဒီရောဂါ ကာကွယ်ကုသရေး အတွက် ရှေ့တန်းကနေ တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင် ဆောင်ရွက် ပေးနေပါတယ်။ ငှက်ဖျားရောဂါနဲ့ ပက်သက်ပြီး ကမ္ဘာကလည်း အထူး စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ ဘီလ်ဂိတ်နဲ့ Bono လို ချမ်းသာကြွယ်ဝ သူတွေက ငွေကြေး စိုက်ထုတ်ပြီး သုတေသနလုပ်ငန်းများ၊ ကာကွယ်ရေးနဲ့ ပညာပေးလုပ်ငန်းများမှာ အလုံးအရင်းနဲ့ ကူညီနေတာလဲ ချီးကျူးဖို့ ကောင်းပါတယ်။ သူတို့လို ငွေကြေးစိုက်ထုတ် ကူညီမှုများကြောင့် မကြာတော့တဲ့ အချိန် အတွင်းမှာ ငှက်ဖျားရောဂါပိုးကို ကာကွယ်နိုင်တဲ့ ဆေးဝါး တစ်မျိုးကို ထုတ်လုပ်နိုင်တော့မှာပါ။
ကင်ညာနဲ့ တန်ဇန်နီးယား (၂)နိုင်ငံမှာ ပြုလုပ်တဲ့ အဆိုပါ သုတေသနဟာ RTS နှင့် AS02 ဆိုတဲ့ ကာကွယ်ဆေး ၂ မျိုးကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေး ထိုးထားတဲ့ ကလေးတွေ မှာ ငှက်ဖျားပိုး ကူးစက်ခံရမှု (၆၅) ရာခိုင်နှုန်း လျော့နည်းပြီး၊ ငှက်ဖျားရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုနှုန်း (၅၉) ရာခိုင်နှုန်း လျော့နည်းတာ တွေ့ရှိ ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် မကြာခင် အချိန် အတွင်းမှာ RTS နှင့် AS02 ကာကွယ်ဆေး တွေကို အခြား ကာကွယ်ဆေးထိုး အစီအစဉ်များနဲ့ အတူ ကလေးငယ်တွေ မှာ အသုံးပြုနိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိုဇမ်ဘစ် နိုင်ငံမှာ ပြုလုပ်တဲ့ အခြား သုတေသန တစ်ခုမှာလဲ ရောဂါ ကူးစက်မှုနှုန်း (၅၈)ရာခိုင်နှုန်း အထိ လျော့နည်းတာ တွေ့ရှိရပါတယ်။
ဒီသုတေသနရဲ့ အပြီးသတ် လုပ်ငန်းတွေကို ၂၀၀၉ နှစ်ဦးပိုင်းမှာ အာဖရိကနိုင်ငံ (၇)နိုင်ငံမှာ လုပ်သွားဖို့ ရှိပါတယ်။ အပြီးသတ် လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ ဒီကာကွယ်ဆေးရဲ့ ထိရောက်မှု၊ ကြာရှည် သုံးစွဲနိုင်မှု၊ လုံခြုံ စိတ်ချရမှု စတာတွေကို လေ့လာသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ လုပ်ငန်းများ အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးသွားမယ် ဆိုလျှင်တော့ ငှက်ဖျားရောဂါ ဆိုတာ ပိုလီယိုနှင့် ကျောက်ရောဂါ ကဲ့သို့ပဲ ဆေးထိုးပြီး ကာကွယ်နိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
[အယ်ဒီတာ့ မှတ်ချက်။ ။ ကျောက်ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးရဲ့ အစွမ်းကြောင့် ကျောက်ရောဂါ ကမ္ဘာပေါ်က ပပျောက်သွား ပါတယ်။ ဆေးစက်ချ တိုက်ကျွေးရတဲ့ ပိုလီယို ကာကွယ်ဆေးရဲ့ ရောဂါကာကွယ်နိုင်မှုနှုန်း (Vaccine Efficacy) က ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ရှိတဲ့အတွက် ပိုလီယိုရောဂါ ကမ္ဘာပေါ်က ပပျောက်သွားနိုင်ရေးဟာ လက်တစ်ကမ်းမှာ ရောက်ရှိနေပါပြီ။ ဒါပေမယ့်လည်း လက်ရှိ စမ်းသပ်ဆဲ ငှက်ဖျား ကာကွယ်ဆေးရဲ့ ရောဂါကာကွယ်နိုင်မှုနှုန်း (Vaccine Efficacy) က သိပ်မကောင်းသေးလို့ ငှက်ဖျားရောဂါ ကမ္ဘာပေါ်က ပပျောက်သွားအောင် လုပ်နိုင်ဖို့ကတော့ အလှမ်း ဝေးနေပါသေးတယ်။]
Posted by Dr Zero3comments
Posted by zinthu2comments